नयाँ पार्टी गठन नै हाम्रो अन्तिम विकल्प « Drishti News – Nepalese News Portal
रचना खडका, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
३२ श्रावण २०७८, सोमबार 7:59 pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै समूह आ–आफ्नै गतिविधिमा केन्द्रित छन् । यसले पार्टी एकताको माहोल झनै बिग्रदै गएको छ । एमाले विवाद समाधान सम्बन्धमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले के सोचिरहेको होला ? तेस्रो तहका नेतृत्वले के सोचिरहेका होलान् ? यसै विषयमा नेपाल समूहका युवा नेता रचना खड्कासँग ‘एमाले एकताको विन्दु’ पेरिफेरिमा दृष्टिन्यूजका सन्तोष साहले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा एकताका प्रयासहरू सफल हुन नसकेका हुन् । उहाँले नचाहेसम्म पार्टी एकतावद्ध हुन सक्दैन । पार्टी एकताका लागि उहाँको भूमिका नै बाधक भएको छ । अध्यक्षको रूपमा एकताका लागि पहल गर्न छोडेर पार्टी विभाजनतर्फ उहाँबाट गतिविधि हुँदै आएको छ । आजसम्म पार्टी एकतावद्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण यो नै हो ।
-तपाईंहरू नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी हो ?
अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकतावद्ध होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । हाम्रो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्ष यही हो । अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकताका लागि पहल जारी राख्दै पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउने हाम्रोे इच्छा र चाहना हो ।
पार्टी विभाजन त बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छ । एमालेभित्र छिर्नै नदिएर ढोका नै बन्द गरिदिए कुनै न कुनै विकल्प खोज्नै पर्छ । नयाँ दल गठन त्यतिबेलाको विकल्प हो । अझै पनि आन्तरिक एकताको सम्भावना मरिसकेको छ भन्ने हामी ठान्दैनौं । तर, अध्यक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यति हुनुहुन्न ।
हाम्रो ठाउँबाट हेर्ने हो भने अध्यक्ष नै पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न चाहनुहुन्न । उहाँहरूले एक्लौटी रूपमा विधान संशोधनका लागि विधान अधिवेशनको काम अगाडि बढाउनु भएको छ । त्यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, उहाँले पार्टी एकता चाहनुभएको छैन ।
हामीले एकताको पहल गरिरहेका बेला विधान संशोधनको प्रक्रिय अघि बढाएर पार्टी अध्यक्ष समूहले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने प्रक्रिया र प्रयासको ढोका बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । नयाँ पार्टी गठन भयो भने त्यसको मुख्य कारण अध्यक्ष नै हुनेछन् । उहाँकै कारण एमाले विभाजन हुनेछ ।
-नयाँ पार्टी गठन नै अन्तिम विकल्प हो ?
हामीलाई पाखा लगाएर पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने प्रक्रिया र प्रयासको ढोका नै बन्द गरिन्छ भने हामीसँग नयाँ पार्टी गठन बाहेक अरु विकल्प हुँदैन । पार्टी अध्यक्षले पार्टीमा हाम्रो लागि ढोका बन्द गरिदिनु भएको छ । आफ्नो बिर्ता झै पार्टी चलाउनु भएको छ ।
विधान संशोधन जस्तो अधिक महत्वपूर्ण विषय एक्लौटी रूपमा अघि बढाउनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हेरेर बस्ने अवस्था हुँदैन । उहाँले जे कदम चाल्नु भएको छ ति सबै खारेज गरेर पार्टी एकताका लागि नयाँ विन्दुमा आउनुपर्ने हुन्छ । तब मात्र एकताका लागि नयाँ पहल हुनसक्छ । नत्र हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्नुको विकल्प हुँदैन । हामी सोही अवस्थामा पुगेका छौं ।
-१० बुँदे प्रस्तावमा एकताको आधार थिएन ?
१० बुँदे प्रस्ताव पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने आधारविन्दु पक्कै हो । तर, एकताको सम्पूर्ण पक्ष यसैमा छ भन्ने होइन । हामीले बैठकमै छलफल गरेर १० बुँदे प्रस्तावलाई एकताको आधार भनेका हाैं । सोहीअनुसार पार्टी एकता गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । हामीले निर्णय गरेको दुई दिन बित्न नपाउँदै ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेर १० बुँदे प्रस्ताव लत्याउने काम भयो । १० बुँदे सहमति विपरित उहाँहरूले गतिविधि गरेपछि त्यसको अस्तित्व समाप्त भयो ।
-त्यसो भए, अब पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने विन्दु के हो ?
१० बुँदे प्रस्तावलाई प्रस्थानविन्दु मान्दै २ जेठ २०७५ मा जाने हो भने सम्भव छ । त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले बनाएका कमिटीहरू खारेज हुनुपर्छ । १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विशेष समझदारी बन्नुपर्छ ।
दुई नेताबीच विशेष समझदारी नभई कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हामी एकताको पक्षमा छौं । तर, जे गरे पनि, जसो गरेपनि सर्लकै फर्कने पक्षमा छैनौं । सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ ।
सम्मानजनक एकता भनेको हामीसँग जोडिएका देशभरका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन सुरक्षाको सवाल हो । यस बीचमा ठूला राजनीतिक घटनाहरू भएका छन् । मुद्धामामिला भएका छन् । त्यसको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
पार्टी सदस्य नविकरण, संगठन समायोजन लगायतका विषय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । महाधिवेशन गर्ने बेला भएको छ । महाधिवेशसनसम्म पुग्न एकपक्षले अर्को पक्षलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसकारण दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्रमाणित हुनेगरी सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
यसको अर्थ यो होइन कि हामीले अध्यक्ष खोजेका छौं । यसको अर्थ विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हो । विश्वासको वातावरण बने पार्टी एकता हुन्छ ।
-विधानको कुन व्यवस्था टेकेर दुई नेताको हस्ताक्षर खोज्ने ?
सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो । विधि विधान त हामीले बनाउने हो । हामी एक भए त्यो असम्भव कुरा होइन । विश्वासको संकट भएको बेला दुवै नेताको संयुक्त हस्ताक्षर जरुरी हुन्छ । हामीले दुई अध्यक्ष भनेका छैनौं । एकअर्कामा विश्वासको वातावरण बनाउनु संयुक्त हस्ताक्षरको प्रस्ताव गरिएको हो ।
हामीले सबैकुरा भोगेर आएका छौं । धोका, अन्याय, अत्याचार, एकलौटी, पेलान सबै भोगेका छौं । उहाँहरू प्रति सबै विश्वास टुटेको छ । त्यसैले संयुक्त हस्ताक्षर एकताका लागि आवश्यक छ ।